Yusuf Garaad: Togdheer - Taxanaha 89 - 90 - Qaybta Tobnaad
Saddex annaga oo ah ayaan ka amba baxnay Berbera. Peter* oo Swiss u dhashay iyo Patrick oo Belgium ah ayaan wada soconnaa. Qorshaheennu waa in aan caawa u hoyanno Burco. Shiikh ayaan sii mari doonnaa.
Waxaa jiray meelo aad u kooban oo haddana teel teel ah oo ciidan, hey'ad dowladeed ama makhaayad iyo laba ah oo dhammaantood si teel teel ah ku soo jeeda waddada laamiga ah. Halkaas ayaa ahayd meesha yar ee astaan nololeed aan ku arkay. Inta yare ee magaalada jooga waxay badankood degganaayeen waddada dhanka Caynaba ka timid haddii aad ku joogto oo aad hore u sii dhaafto waddada Shiikh ka timid xaafadda yare ee dhanka midig kaa qabaneysa ee Isgaarsiintii hore ee magaalada iyo hey’ado Dowladeed ay ku yaalleen.
*Safarkaasi wuxuu ahaa kii ugu dambeeyay ee aan wadagalnay Peter. Sabti 6 – dii Oktoobar 1990 ayaa Peter lagu dilay inta u dhexeysa Darar-weyne iyo Hargeysa.
Posted by Yusuf Garaad at 14:33:00